တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mrs. Sigrid Kaag အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mrs. Sigrid Kaag အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ - ၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် နယ်သာလန် နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mrs. Sigrid Kaag အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက် ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများတွင် တပ်မတော် မှအစိုးရအဆက်ဆက် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရမှု အခြေအနေများနှင့် ယခုအခါတွင်ပြည်သူများ မှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းနေချိန်၌ တပ်မတော်မှခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည် ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက် အလက်များမှန်ကန်မှုရှိရန် လိုအပ်မှုနှင့် ယူဆချက်များဘက်လိုက်မှုမရှိရန် လိုအပ်မှုအခြေအနေများ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား ဥပဒေနှင့် အညီစိစစ်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသဘော တူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယ၀န်ကြီးဟောင်း H.E. Ambassador Mrs. Rosario Manalo ဦးဆောင်သည့် လွတ်လပ်သောစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှလိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရရှိရေး တပ်မတော်မှအပြည့်အ၀ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေ အနေများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နယျသာလနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားကုနျသှယျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီး H.E. Mrs. Sigrid Kaag အားလကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ - ၈
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ နယျသာလနျ နိုငျငံ၊ နိုငျငံခွား ကုနျသှယျ ရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီး H.E. Mrs. Sigrid Kaag အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး နယျသာလနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားကုနျသှယျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ နယျသာလနျ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Wouter Jurgens နှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျ ရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ လှတျလပျရေးရပွီးခြိနျမှစ၍ မွနျမာနိုငျငံ၏နိုငျငံရေးပွုပွငျ ပွောငျးလဲမှုမြားတှငျ တပျမတျော မှအစိုးရအဆကျဆကျ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးခဲ့ရမှု အခွအေနမြေားနှငျ့ ယခုအခါတှငျပွညျသူမြား မှ ရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးပျေါလြှောကျလှမျးနခြေိနျ၌ တပျမတျောမှခိုငျခိုငျမာမာရပျတညျ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးအခကျြ အလကျမြားမှနျကနျမှုရှိရနျ လိုအပျမှုနှငျ့ ယူဆခကျြမြားဘကျလိုကျမှုမရှိရနျ လိုအပျမှုအခွအေနမြေား၊ တဈဖကျနိုငျငံသို့ ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားအား ဥပဒနှေငျ့ အညီစိစဈလကျခံနိုငျရေးအတှကျ မွနျမာနှငျ့ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နှဈနိုငျငံသဘော တူညီခကျြဖွငျ့ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဒုတိယဝနျကွီးဟောငျး H.E. Ambassador Mrs. Rosario Manalo ဦးဆောငျသညျ့ လှတျလပျသောစုံစမျး စဈဆေးရေးကျောမရှငျမှလိုအပျသညျ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားရရှိရေး တပျမတျောမှအပွညျ့အဝပူးပေါငျး ကူညီဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွေ အနမြေားအား ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက နယျသာလနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားကုနျသှယျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျပွီး တကျရောကျ လာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။